Wasiirkii Arimaha Gudaha dalka Uganda Ayaa Meedkiisa Ayaa Lagaarsiiyey Magaalada Kampala(Daawo Sawiarada) – STAR FM SOMALIA
Magaalada Kampala ee dalka Uganda, waxaa la geeyay shalay Meydka Wasiirkii Arimaha gudaha dalka Uganda Gen. Aronda Nyakairima, oo Sabtidii lasoo dhaafay ku dhex geeriyooday Diyaarad uu la socday.
Garoonka Diyaaradaha Entebbe ee Magaalada Kampala, waxaa meydka ku sugaayay Ehelada Wasiirkii Arimaha Gudaha, Saraakiil ciidanka ka tirsan iyo sidoo kale Wasiiro Dowladda Uganda ka tirsan.
Meydka Wasiirkii Arimaha Gudaha dalka Uganda, ayaa la soo saaray Diyaarad rakaab, waxaana saacad ku dhawaad ay qaadatay soo dejinta naxashka meydka uu ku jiray, maadaama Diyaarada ay saarnaayeen Boorsooyin badan oo rakaabka ay lahaayeen.
Naxashka Meydka uu ku jiray oo lagu huwiyay calanka dalka Uganda, ayaa la soo dejiyay, iyadoo ciidamada Baambeyda dalka Uganda ay garaacayeen Astaanta Qaranka dalka Uganda.
Hal daqiiqo oo aamusnaan ah ayeey galeen masuuliyiintii iyo Saraakiishii ciidanka ee ku sugnaa Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kampala.
Sawiro laga soo qaaday Garoonka ayaa muujinaayay ehelada Wasiirkii Arimaha Gudaha dalka Uganda oo ooynaya kana xun geerida ku timid hormuudka reerkooda.
Taliye ku xigeenkii hore ee Millateriga dalka Uganda, Jen. Ivan Koreta ayaa markii la soo dajiyay naxashka Maydka sheegay in Jen. Aronda uu ahaa nin muhiim u ahaa xukuumadda Uganda, isla markaana uu ka mid ahaa Jeneraalladii ugu geesisanaa ee soo maray Uganda.
Jen. Aronda, ayaa xilka Wasaarada Arimaha Gudaha Uganda, waxaa loo magacaabay 2013, wuxuuna haayay muddo 2 sano ah, balse isaga oo kasoo duulay Magaalada Seol ee Xarunta dalka Koonfurta Kuuriya, kuna wajahnaa dalka Dubai, ayuu ku dhex dhintay diyaaradii uu saarnaa.
Ciidamada Dowladda oo saaka howlgal Ka Sameyey Beerta Daraawiishta